ကျွန်တော်တို့ Window7 မှာ HDD Partition ကို မည်သည့် Software ကိုမှမသုံးပဲ Extension ပြန်လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Run Box လေးထဲကနေ “diskmgmt.msc” လို့ရိုက်လိုက်ပါ
ထိုအခါအောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Disk Management ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်က အခုလက်ရှိ System Partition ထဲကနေပီး ၀င်းဒိုးကိုထိခိုက်မှုမရှိပဲ Ext ထပ်ခွဲမယ့်အပိုင်းလေးပြမှာမို့လို့ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း (C:) ရဲ့ အစိမ်းပုတ်ရောင်ဘားလေးပေါ်မှာ RC ထောက်ပီး Shrink Volume ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။
ထိုအခါမှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း လက်ရှိမိမိ Shrink လုပ်လိုက်တဲ့ System Partition ထဲက လစ်လပ်တဲ့နေရာတွေကို Querying လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအပိုင်းမှာတော့ အချိန်အနည်းငယ်ယူပါလိမ့်မယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Partition တစ်ခုလုံးရဲ့လွတ်တဲ့ နေရာ တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့ပါ။အားလုံး လွတ်နေတဲ့ Capicity တွေရှာပီးသွားပီဆို၇င်တော့ အောက်
ဒီနေရာမှ ကြည့်ရမှာက သုံးမျိုးရှိပါတယ်…
1- Total size before shrink inMB
2- Size of available shrink space inMB
3- Enter the amount of space to shrink in MB
နံပါတ် ၁ ကတော့ လက်ရှိ သင့်နဂိုမူလခွဲထား (သတ်မှတ်ထား) တဲ့ System Partition ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၂ ကတော့ လက်ရှိ ပါတေးရှင်းမှာ ရှိတဲ့ လစ်လပ်တစ်နေရာအပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၃ ကတော့ သင့်စိတ်ကြိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသတ်မှတ်မယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ဆိုတော့က ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ နေရာသိပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Sample အနေနဲ့ပဲ ရှင်းပြမယ်… ဆက်လိုက်ရအောင်လားဗျာ…
အဲတော့ကျွန်တော်က အဲဒီဘောက်ခ်လေးထဲမှာ ၅၀၀၀ ဆိုပီးရိုက်ပီး Shrink လုပ်လိုက်တယ်…
ထို့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ၅၀၀၀ MB ဆိုတာကို အမဲရောင်နဲ့ဖော်ပြပေးပါတယ်…
အဲဒီအမဲရောင်အနေအထားနဲ့ကတော့ Operation System မှာ ဘာမှ အလုပ်မလုပ်သေးပါဘူး..ဒီတော့ သူ့ကို အသက်ဝင်ပီး ဒေတာတွေ သွင်းနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့က Value Lable တွေ သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမဲရောင်နေရာလေးမှာ RC ထောက်ပီး New Simple Valume ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Valume တစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့အတွက် Configuration ပိုင်းတစ်ခုတက် လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ Next ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာရင်တော့ ဘာမှမပြောင်းလဲပဲ Next ကိုပဲနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကတော့ မိမိ Created လုပ်ထားတဲ့ Partition အသစ်ကို မိမိသတ်မှတ်ချင်တဲ့ Drive Letter သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်… မိမိစိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပီးသွားရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
ဘာမှမပြောင်းလဲပဲ Performaquick format ဆိုတာလေးကို Check Box On ပီး Next နှိပ်လိုက်ပါ။
ပီးသွားရင်တော့ Finish ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရရင်တော့ ခုနက အမဲရောင်လိုင်းပုံစံနဲ့ Unloacted မဟုတ်တော့ပဲ… Healthy ဖြစ်နေပီး Data တွေသွင်းနိုင်ထုတ်နိုင်တဲ့ Active ဖြစ်နေတဲ့ Partition တစ်ခုကို
ပြန်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခုနက Healthy ဖြစ်နေတဲ့ Partition ပေါ်မှာ RC နှိပ်ပီး Delete Valume ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါက အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ထိုနေရာမှ YES ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း အစိမ်းပုတ်ရောင်လေးကနေ အမဲရောင် Unallocated ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ System Partition ဖြစ်တဲ့ C: နေရာရဲ့ အစိမ်းပုတ်ရောင်နေရာလေးမှာ RC နှိပ်ပီး Extend Valume ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၄င်းနေရာမှာ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ပီးရင်တော့ Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် မူရင်း System Partition Size ကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
G-mail = mr.zarnithannwynn@gmail.com
G-talk = genius@uzarni.co.cc
FB = FB.com/CZarni.86
Cristiano Zarni @ ဦးဇာနည်
ထိုသို့လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့တွေ Computer မှာသုံးနေတဲ့ Hard Disk ကို မည်သည့်
ကွန်ပျူတာ မှာ မ ဆို တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ချွတ်ယွင်းချက်ရှိပါတယ်။ Chipset ပြဿနာပါ။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ Driver Don’t
Search လုပ်ထားတဲ့ Computer က Chip set က Intel Chip Set ဆိုရင် Nvidia Chip Set ဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ Board မှာတော့ Support မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေ မယ့် Nvidia Chip
Set အလုပ်လုပ်တဲ့ Board မှာ Driver Don’t Serach လုပ်ထားရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ Computer တပ်လိုက်ပါ။ သူ့ဘာ ၀င်း ဒိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့.
ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့ တွေ Run ထဲမှာ devmgmt.msc ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က Driver Don’t Search လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့က အပေါ်ကပုံထဲမှာက အနော်က လုပ်ထားပီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သင်တို့စက်မှာ
တော့ အဲဒီလိုပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး… သင်တို့စက်မှာကတော့ HDD ရဲ့ Product Name တွေနဲ့ S/N တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အနော်တို့က တစ်ခုချင်းစီကို စလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်….
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့က ပထမဦးဆုံး HD Drive Module တစ်ခုကို RC နှိပ်ပီး Update Driver Software ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Browse my Computer for dirver software ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ပါပုံမှ Let me pick fromalist of device drivers on my computer ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ
၄င်း Disk Drive ဆိုတာလေးကိုရွေးပီး Next နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Window XP မှာဆိုရင်တော့ ဒါဟာ Standard Driver ပေ့ါဗျာ…..
ဒါကတော့ လက်ရှိ Branded Driver ကို Standard Driver အဖြစ် ပြောင်းလည်းနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါ တယ်။ပီးသွားရင်တော့အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာရင်တော့
Close ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် HDD Driver Module တစ်ခုကို Standard အဖြစ်ပြောင်းပီး သွားပီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာ တော့ ကျန်တဲ့ Hdd Driver Module တွေကိုလည်း အလားတူ Process အတိုင်းအကုန် လုံးကို Standard အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ HDD ကို အချိန်မရွေး အမျိုးအစားမတူတဲ့ MB တွေမှာ သွားရောက်တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မရှင်းလင်ချက်များရှိပါက ကျွန်တော့် မေးလ် သို့မဟုတ် G-talk သို့မဟုတ် FB အကောင့်များမှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
G-mail : mr.zarnithannwynn@gmail.com
G-talk : genius@uzarni.co.cc
FB : FB.com/CZarni.86
G-mail ကို Offline အနေဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြုခြင်း
ဒီလိုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် မိမိမေးလ်ကို Backup လုပ်ထားခြင်းဖြင့် အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။
ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက G-mail ကို ၀န်လိုင်းရှိမှ အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပဲ
Online မရှိလည်း မိမိကွန် ပျူတာထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ရတဲ့ဒေတာတွေကို အချိန်မရွေးပြန်
လည် ကြည့်ရှုလို့ရတယ်လေ။ အဲဒီမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှာပဲလုပ်ဆောင် ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မိမိ အကောင့်ထဲမှာ ရှိသမျှဒေတာတွေအား လုံးပါဝင်နေမှာမို့လို့ အင်တာနက်ဆိုင်တို့ ဘာတို့မှာ မလုပ်ဆောင် သင့်ပါဘူး။ ရုံးက
ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း User Account ဖြင့် ကိုယ်ပိုင် Account လေးနဲ့ သုံစေချင်ပါတယ်။ သူသူကိုယ်ကိုယ် ကို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို တပါးလူလက်ထဲမ
ရောက်ချင် ကြဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကတော့...ပထမဦးဆုံး မိမိ မေးလ်ကို ၀န်လိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ၀င်လိုက်ပါပြီးလျှင် Setting ထဲကိုဝင်ပြီး Offline ဆိုတဲ့ Tab မှာ Enable Offline Mail for this computer ဆိုတာလေးကို Radius Check Box လေးဖွင့်ပေးပြီး
Other Options မှာ createadesktop shortcut ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပြီး Save and Change လုပ် လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ G-mail Server မှ သင့်ရဲ့ မေးလ်ထဲမှ အကြောင်းအရာတွေကို သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကို စတင် ကူးယူနေပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့ သင့်မေးလ်ထဲမှ ဒေတာများကို ကူးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာထဲမှာ Offline အနေအထားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Offline Installation ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်က အနည်းငယ်တော့ကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘိာု့လည်း ဆိုတော့ သင့်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရက်စွဲအလိုက် တစ်ခုခြင်းစီကို ကွန်ပျူတာထဲသို့ ကူးယူနေခြင်း ကြာင့်ဖြစ်ါတယ်။ အား လုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ။အောက်ပါပုံအတိုင်း Offline Mail system က သင့်ကွန်ပျူတာရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ ပေါ် နေပါလိမ့်မယ်။
Offline Mail ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ၀င်ထားတဲ့ မေးလ်တွေကိုသာ စစ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်ပြီး မေးလ်ထဲမှာ ရှိသော Attachment File တွေကိုတော့ Donwload လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့ မေးလ်လည်းပို့လို့ရမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ သူက Offline အနေဖြင့် သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက အသစ်ဝင်လာတဲ့ မေးလ်တွေကို Update လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ၁ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ Offline Mail မှ တဆင့် ၀န်လိုင်းမေးသို့ ၀င်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ Update လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ဆင်ပြေမယ်ထင်ပါ့။ အကယ် လို့များ ကျွန်တောရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများမှ ရှင်းလင်းမှု မရှိတဲ့နေရာမျိုးများရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ E-mail mr.zarnithannwynn@gmail.com သို့ ဆက်သွယ် မးမြန်းနိုင်ါတယ်။ ကျွန် တောဝန်လိုင်းရှိတဲ့ အချိန် မျိုးမှာ လည်း တိုက်ရိုက်ဖြေကြားပေးပါ့မယ်။
System Properties မှာ CPU ကို နာမည်ပြောင်း (Only Window XP)
မိမိကွန်ပျူတာမှာ CPU ကို အမြင်ဆုံးနာမည်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမတွေအတွက်ပါ...
ကျွန်တော်တို့ My Computer Properties ကို ကြည့်လိုက်ရင် စီပီယူ ဘယ်လောက်ရှိလည်း
ဆိုတာကို ကြည့်နိုင်တယ်လေ.. အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က PII Computer လောက်ကို
လည်း အမြင့်ဆုံး CPU Series လောက်ထိ ထားလို့ရတယ် ဒီလိုဗျ လုပ်ပုံက
Subnet Masks မှာ ဖော်ပြမယ့် Number တွေပါ။ (Memorize Them!)
ဥပမာ - 10011001 ကို Binary ပြောင်းမယ်ဆိုရင်
ဥပမာ - 11100011 ကို Binary ပြောင်းတဲ့အခါ
ကျွန်တော်သိသော TEMP ဖိုင်ရှင်းနည်းကောင်းကောင်းလေးပါ....
ကျွန်တော်တို့ Browser တွေဖွင့်ထားတာကြာလာတာတို့
Tab တွေခေါ်ထားတာများလာတဲ့အခါမှာ Loading တအားကြာပီး
လေးလာပါတယ်... ဒီအခါမှာ လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ Browser တွေကို
တစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါ။ပီးသွားရင် CLI Mode (Run ထဲမှ CMD ကို
ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။) မှာ အောက်ဖော်ပြပါ Parameter တွေနဲ့
del ကိုတွဲရိုက်လိုက်ပါ။ အနီရောင် အတန်းလေးကတော့ သင့်ကွန်
ပျူတာထဲက User Name ဖြစ်ပါတယ်...
"del *.* /s/f/a/q" ဖြစ်ပါတယ်... ပီးသွားရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင်သုံးထားတဲ့ Browser ကသိမ်းထားတဲ့ Temporary ဖိုင်
တွေကို ရှင်းလင်းပီးသားဖြစ်သွားပီး သင့် Browser ကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်
ကျရင် သွက်သွက်လက်လက်ပြန်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒီနည်းလေးက
( Cristiano Zarni @ဦးဇာနည်)
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်လေ USB Stick တွေ Write Protected ထိ
သွားတာတွေရှိပါတယ်... အခုဒီကောင်လေးကတော့ Write Protected
ထိထားတဲ့ Stick တော်တော်များများကို Format ချပေးနိုင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ Window 8 မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်အသုံးပြုလိုသူများအတွက်ပါ...
၆၄ မှာရော.... ၃၂ မှာရော ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်.....
Window 8 ကို Activated မဖြစ်သေးသူများအတွက် စိတ်ချလက်ချ သုံးစွဲလို့ရမယ့်
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်လေ.. Word တို့ Excel တို့ကနေ PDF ကိုပြောင်းချင်တဲ့အခါ
ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကလေးက eZ PDF Builder လေးကိုဒေါင်းပီး
ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့ အခါမှာFormat အတွက် ရွှေးချယ်ရတဲ့ Quick နှင့် Regular
ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Quick နှင့် တင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ် မယ် Regular နဲ့ တင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆို
တာ ကို သိပြီးတင်တာနဲ့ ဒီအတိုင်း တင်နေတာထပ်စားရင် အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို တင်ပြ ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချိူ့ Windows
တွေမှာ FAT File System မပါရှိတော့ပါဘူး NTFS File System ကိုဘဲ ပါပါတော့တယ်။ေ
နာက်ပြီး no Changes လဲ ပါမလာတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အရေးမကြီးပါဘူး။ Quick Format
နှင့် Regular Format ကို နားလည်ဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။ NTFS နှင့် FAT အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ Quick Format နဲ့ တင်တဲ့ အခါမှာ Windows တင်တဲ့ အပိုင်းက Disk ထဲက File
တွေကို ဖယ်ရှား (Remove) ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Drive ရဲ့ bad Sectors တွေကို Scans မလုပ်ပေးပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် Bad Sectors ရှိရဲ့သာနဲ့ bad Sectors ကို Scan မလုပ်ဘဲ
ကောင်း တဲ့နေရာမှာဘဲ တင်သွားခဲ့မည်ဆိုလျင် Drive က မပျက်စီးဘူးလို့ ထင်ပြီး Quick Format ဘဲ ရွေးချယ်သင့်သလား။ ကိုယ်တိုင်း စဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့် Quick Format က Windows တင်တာ မြန်ပေးမဲ့ bad Sectors တွေကို Scan မလုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိ Drive မှာ
Bad Sectors ရှိရဲ့သာနဲ့ မစစ်ဆေးဘဲ Quick Format နဲ့ဘဲ တင်နေမယ်ဆိုရင် Hard Disk က ရေရှည်ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ Disk Error ရှောင်းရှား နိုင်သလာ ကိုယ်တိုင်း
Scan လုပ်ပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Quick Format ထပ်စားရင် Drive မှာ Disk Error တွေကို ရှောင်းရှားနိုင်ပါတယ်။